Ma yihiin layliyo kicinta garashada iyo noocyada jira | Ragga Stylish
Jarmal Portillo | | Caafimaadka
Waxaa jira cuduro qaarkood, da 'sii kordhaya iyo qaar ka mid ah caadooyinka hab nololeedka oo aan haba yaraatee ku filnayn caafimaadkeenna oo wax u dhimi kara shaqaynta garashada. Markay taasi dhacdo, waxaan luminay waxqabadkeenii, xusuusteenii, iyo awoodeena kale ee sababaynta ee aan caadiyan lahaan jirnay. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira farsamooyin iyo laylisyada kicinta garashada taasi waxay naga caawineysaa inaan ka hortagno xumaanta maskaxdeena iyo, marka lagu daro, inaan horumarino shaqeynta awoodayada maskaxeed.
Qodobkan waxaan kaala hadlaynaa qaar ka mid ah laylisyada ugu fiican ee garashada garashada.
1 Waa maxay kicinta garashada?
2 Farsamooyinka iyo jimicsiga kicinta garashada
4 Leyliga ugu fiican ee jimicsiga kicinta
Waa maxay kicinta garashada?
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan ogaano waa waxa aan uga jeedno kicinta garashada. Ma aha wax ka badan xulashada noocyo farsamooyin iyo istiraatiijiyado u adeega hagaajinta waxtarka awoodayada garashada iyo howlaha fulinta sida ay yihiin xusuus, af, fiiro gaar ah, sababayn ama qorsheyn.
Aaggan waa la kordhiyay gaar ahaan wax ka qabadka daaweynta cudurada inta badan sababa cillad garasho. Alzheimers waa mid ka mid ah cudurrada ugu caansan ee garashada cillad garashada. Caadi ahaan, da'da iyo gabowga waxaan u baahanahay tababar maskaxda si loo gaaro loona ilaaliyo isla jawaab celinta.
Si tan loo sameeyo, waxaan qabannaa howlo kala duwan oo kiciya awooda maskaxda. Waxaan hoos ku arki doonnaa qaar ka mid ah farsamooyinka iyo layliyada kicinta garashada.
Farsamooyinka iyo jimicsiga kicinta garashada
Waxaa jira hawlo fara badan oo lagu kicinaayo maskaxdeena oo ay ku jiraan waxqabadyada buugaagta jimicsiga ilaa noocyo kale oo firfircoon sida ciyaaraha maskaxda. Farsamooyinkan iyo waxqabadyadan waxaa loo sameeyay in loo sameeyo dadka waaweyn iyo carruurta.
Buugaagta jimicsiga kicinta garashada, sidaan horay u soo sheegnayba, waa kuwo aad waxtar u leh awood u lahaanshaha ka shaqeynta howlahan fulinta iyo xusuusta, feejignaanta, sababaynta, xalinta dhibaatooyinka iyo awoodaha feejignaanta. Buugaagtaan jimicsiga waa kuwo aad u fudud in la helo maaddaama aad labadaba ka iibsan karto dukaamada buugaagta isla markaana si toos ah ugala soo bixi karto internetka. Waxay kuxirantahay qofka aad u adeegsaneyso iyo heerka garaadka cillad garasho ee ay leeyihiin, waxaa jira heerar kala duwan oo dhib ah si ay u xalin karto ku dhowaad qof kasta oo xoojin kara awoodooda maskaxeed.
Nooc kale oo ka mid ah layliyada kicinta garashada ayaa loo yaqaan ciyaaraha madadaalada maskaxda. Waxaa lagu soo koobay codsiyo kala duwan oo moobiil ah oo waliba loo heli karo kombiyuutaro iyo kiniinno waxayna leeyihiin faa iidada in loo isticmaali karo waqti kasta, meel kasta. Sidoo kale, yeelashada aragtiyo iyo codad badan ayaa gacan ka geysan kara hagaajinta xusuusta garashada. Waxay bixiyaan suurtagalnimada awood u siinta jaangooyooyinka heerarka dhib ee la qabsiga heerka qof kasta. Ma dejin karno isla heerka dhibaatada haddii aan ku tababbarayno carruurta ama dadka waaweyn.
Mid ka mid ah farsamooyinka u adeega kicinta maskaxdeena iyo sidoo kale wuxuu la shaqeeyaa noocyo jimicsi ah si loo hagaajiyo awooddeena waa farsamada neerfaha. Teknoolojiyadaani waxay ku saleysan yihiin mabaadi'da qalabka casriga ah ee awood u leh inay duubaan waxqabadka maskaxdeenna si shakhsiyan loola jaanqaadi karo. Waxqabadyada qaar iyo dabagalka ayaa loo baahan yahay si loo kormeero horumarka shaqsi kasta ee imtixaanadan.
Waxaa muhiim ah inaan tilmaamno in kicinta garashada ay waxtar yeelan karto inta ay la jaanqaadayso heerka garashada iyo kartida qof walba. Waa macquul inaan ku mashquulineyno dadka maskaxda yar maskaxdooda jimicsi heerkooda ka sareeyo waxaan aaminsanahay in natiijooyinka xun ay ka dhigan yihiin inuusan qofku horumarin. Waxaan u baahanahay inaan la qabsano layliyadaan awooda garashada qofka iyo ka dib, oo si tartiib tartiib ah u qiimeynaya isbeddelkeeda.
Waa wax xiiso leh in la qabto waxqabadyo dhiirrigeliya dhiirrigelinta iyo xiisaha taas oo caqabad ku ah. Tani waa sida aan u wanaajinno aragtida isku-kalsoonaanta iyo niyadda si loo kordhiyo, marka loo eego, fursadaha guusha ee waxqabadyada.
Leyliga ugu fiican ee jimicsiga kicinta
Waxaa jira agabyo iyo nashaadyo kaladuwan oo kaladuwan iyo sidoo kale layliyo kicinta garashada oo noo ogolaada inaan ka shaqeyno awoodaha kaladuwan iyadoo kuxiran qof walba. Layli isku mid ah ayaa loo isticmaali karaa in lagu tababaro wax ka badan hal awood garasho. Awood isku mid ah ayaa sidoo kale looga shaqeyn karaa layliyo kala duwan.
Aan aragno laylisyada ugu caansan:
Jimicsiyada fiiro gaar ah u leh: Iyagu waa kuwa iskudaya inay hagaajiyaan feejignaanta waxayna ku tiirsan yihiin hawlo kala duwan si ay u kordhiyaan. Waxaan leenahay feejignaan joogto ah, feejignaan muuqaal ah, maqal xul ah, iwm.
Jimicsiyada aragtida: Iyagu waa kuwa iskudaya inay hagaajiyaan aragtida dadka, labadaba muuqaal iyo dhibbane, iyo taabasho. Waxaa lagu sameyn karaa jimicsi qaab firfircoon oo madadaalo leh.
Layliyo lagu fahmayo: Waxay isku dayeysaa inay horumariso awoodaha aasaasiga ah ee garashada waxayna ku xiran yihiin awoodaha kale si loo horumariyo loona kordhiyo waxqabadka.
Jimicsiyada xusuusta: xusuustu waa mid ka mid ah awoodaha garashada ee marka hore bilaaba inay sii xumaadaan kolba markaynu ku sii soconno da'deenna. Waa muhiim in laga shaqeeyo aagga maskaxdeenna si looga hortago hoos u dhacan oo maskaxda loo sii wado si joogto ah. Si tan loo sameeyo, waxaan sameyn karnaa layliyo noocyo badan ah sida daawashada sawirrada, ka jawaabidda su'aalaha, xafididda liisaska ereyada, iwm.
Jimicsiyada luqadda: mid ka mid ah awoodaha aasaasiga ah ee garashada ee dadku ku wada xiriiri karaan waa luqadda. Horumarinta luqaddan laga soo bilaabo da'da hore waa lagama maarmaan. Waxaan sameyn karnaa jimicsi, waxaan qori karnaa ereyo isku mid ah iyo ereyo isku mid ah, ereyo taxane ah, waxaan soo saari karnaa ereyo cusub oo isugu jira xarfaha hore iyo muujinta isku xigxiga erayada, iyo kuwo kale.
Jimicsiyada xawaaraha lagu shaqeynayo: xawaaraha hawsha ama waa hawl maskaxeed oo dejisa xiriirka ka dhexeeya fulinta garashada iyo waqtiga lagu maalgeliyay. Waxay la mid tahay waqtiga ay nagu qaadaneyso inaan kaga jawaabno kicinta. Leyligaaan waxaad ku jimicsaneysaa inaad ku hagaajiso macluumaadka oo aad awood u leedahay inaad si dhakhso leh ugu shaqeyso adiga oo aan luminin waxtarka iyo hagaajinta waxqabadka.
Jimicsiyada jihaynta: carruurta iyo waayeelkaba waxay soo bandhigi karaan dhibaatooyin iyo dhibaatooyin xagga jihada ah. Waxaad sameyn kartaa waxqabadyo sida akhrinta qoraalada oo hadhow waxaad ka jawaabi doontaa su'aalaha, qof dhig meel aan la aqoon oo waxaad siin kartaa khariidad uu ku helo meel kale, iwm.
Sidaad arki karto, waxaa jira noocyo badan oo jimicsiyo kicinta garashada ah. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto mowduucan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Jimicsiyada kicinta garashada